Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa balaliiwwan gara Maqaleefi Laalibalaa haqe – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooDaandiin Qilleensaa Itoophiyaa balaliiwwan gara Maqaleefi Laalibalaa haqe
(BBC Afaan Oromoo) — Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa Maqaleefi Laalibelaa dabalatee balaliiwwan gara Kaaba Itoophiyaatti taasisuuf ture sababii haala qilleensaa rakkisaa uumameen haquu isaa beeskise.
Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa dabalataanis balaliiwwan gara Gondar, Aksuumiifi Shireetti taasisuuf ture haala qilleensaa rakkisaa uumameen har’a ganama haquu isaas himeera.
Balaliiwwan har’a haqamanis haalli qilleensaa fooyya’uu isaa Tajaajila Metirooloojii Biyyaalessaa irraa odeeffannoo argamu irratti hundaa’uudhaan akka deebi’ee akka itti fufu taasifama jechuun ibseera.
Haata’u malee, odeeffannoon Tajaajila Metirooloojii Biyyaalessaa irraa argame akka garsiisutti haalli qilleensaa balaliiwwan gufachiise guyyoota lamaan itti aanan keessattis akka itti fufudha.
Oduu walqabateen Jimaata waaree boodarraa kaasee Sanabatallee samiin magaalaa Baahir Daar awwaaraafi qayyoota awaaraan uumameen aguugamee akka oole jiraattonni magaalattii BBC’tti himaniiru.
Taatee kana ilaalchisuun qindeessaan garee raagaafi xiinxala dursanii of-eeggachuu wiirtuun tajaajila metirooloojii lixa Amaaraa Obbo Xilaahun Wuubuu, “Qayyoonni haawwarri uumameera,” jedhan.
Balaan xiyyaaraa ET-302 waggaa har’aa qaqqabe akkamiin yaadatama?
‘Boeing’ awwaalcha abbaakoorratti argamee ani garuu hin dandeenye’
Qayyoonni dhukkee kun kan uumamu obonboleettii naannoo goginsi jirutti uumamuun walqabatee kan uumamu yoo ta’u, obobboleettiin awaaraa Baahir Daar irratti mul’ate ammoo sababii dhiibbaa qilleensaa Sudaan irratti uumameen ta’uu dubbatu.
Qayyoonni awaaraa kun kan uumame Baahir Daaritti qofaatti osoo hin taane, Gondar irrattillee mul’achuu isaa BBC’tti himeera ogeessi kun.
Taateen kun yeroo hedduu saatii dheeraa akka hin turre kan dubbatan Obbo Xilaahun, baduu akka danda’u ibsu. Haata’u malee, haala qilleensaa akkasii keessatti xiyaaronni ka’uufis ta’e qubachuudhaaf akka hin argineef waan aguuguuf balaliidhaaf rakkisaa akka taasisu dubbatu.
Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa ibsa baaseen magaalaawwan balaliin haqaman keessaa qayyoonni awaaraa kan itti uumame magaalaalee Baahir Daariifi Gondaridha.
Ogeessi kun akka jedhanitti qayyoonni awaaraa kun rakkoo qaam argansuu irratti, keessattuu namoota asmii qabanii rakkisaadha. Kana malees, wanti uumame kun dhibee manjalloo(boquu gogsaatiifsi sababa ta’uu ta’uu mala jechuun akeekkachiisaniiru.
Baahir Daar kan jiru rippoortarri BBC akka mirkaneeffatetti qayyoonni awaaraa uumame kun har’a baayyee xiqqaachaa kan dhufe ta’us mallattoowwan mumul’atan garuu ni jiru.
Uhuuruu Keeniyaataan Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Chaayinaatti taasisu akka dhaabu gaafatan
Uhuuruu Keeniyaataan Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Chaayinaatti taasisu akka dhaabu gaafatan (BBC Afaan Oromoo)…
Haleellaan Sudaan jabaateera, Daandiin Qilleensa Itoophiyaa balalii gara Kaabaatti dhaabe.
Haleellaan Sudaan Itoophiyaa Irratti Geessiftu Jaabaatee Lafa Dabalataa To'atte. Oduu Ammee Waraanni Sudaan magaalaa #Salaambar…
Jilli ABO gara Finfinneetti sossohe
China prepares to declare VICTORY over coronavirus outbreak as President Xi visits quarantined residents in Wuhan and the city closes all of its 14 makeshift hospitals